Maxkamadda Ciidanka oo maanta Baydhaba u fariisatay 3 Nin oo dhawaan Oday dilay Iyo Kiisas kale oo Culus | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Maxkamadda Ciidanka oo maanta Baydhaba u fariisatay 3 Nin oo dhawaan Oday...
Maxkamadda Ciidanka oo maanta Baydhaba u fariisatay 3 Nin oo dhawaan Oday dilay Iyo Kiisas kale oo Culus
Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka Sida Xasan Cali Nuur Shuute oo Warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu ka warbixiyay kiisas dacwadeedka ay u tageen Baydhaba.
Shuute;waxaa uu sheegay in isla maanta ay u fariisteen dacwad ciqaabeedka Saddex wiil oo dhawaan Oday lagu magacaabi jiray Sheekh Mad-dheer ku dilay masaajid ku yaalla Magaalada Baydhaba,kuwaa soo uu maamulka Koonfur Galbeed gacanta ku soo dhigay.
Waxaa uu xusay in Raggaas Maxkamadda ay Xukun ka gaartay ayna dib ka shaacineyso go’aanka Maxkamadda ay ka gaartay Saddexda Nin ee dilay Sheekh mad-dheer.
Sidoo kale waxaa uu xusay in sababta ay Baydhaba u tageen ka mid tahay kiis la xiriira Askar dhawaan leysay Dad danyar ah oo gargaar loo qeybinayay,halkaas oo is rasaaseyn Ciidanka u dhaxeysay ay ku dhinteen 17 Qof oo shacab ah.
Waxaa uu xusay in hadda ay Guddi u saareen islamarkaana ay Guddigaas ka shaqeyn doonaan soo ogaanshaha Askarta Rasaasta Ridday ee Dadka leysay iyo sababta ka dambeysay Khilaafkooda kaddibna ay Maxkamadda u fariisan doonto.